भव्य बन्यो रानीपोखरी « Postpati – News For All
कात्तिक ४, काठमाडौँ । पुनर्निर्माण गरिएसँगै ऐतिहासिक सम्पदा मध्येको एक रानीपोखरीको सुन्दरताबारे चर्चा बढ्न थालेको छ ।
राजा प्रताप मल्लका पालामा बनेको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वरको मन्दिर र आसपासका संरचना त्यही समयको ढाँचामा निर्माण गरिएको हो । ९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि फरक शैलीको मन्दिर बनेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पले गर्दा रानीपोखरी भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो । अहिले प्राचीन आकारको स्वरूपमा मन्दिर बनाइएको हो । राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको असामयिक निधन भएपछि शोकाकुल रानीलाई खुसी पार्न वि. सं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण भएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।